Izimoto Zasekhaya Zizoba Zilungele Ukushintshwa Kwezimoto Zokushayela Okuzenzakalelayo | RayHaber | raillynews
IkhayaTURKEYIsifunda saseMarmaraI-16 BursaIzimoto Zasekhaya Zizoba Zilungele Ukushintshwa Kwokushayela Kwe-Autonomous
21 / 01 / 2020 I-16 Bursa, JIKELELE, Highway, HEADLINE, Isifunda saseMarmara, yezimoto, TURKEY, VIDEO
imoto efuywayo izolungela ushintsho oluzimele lwe-drive
ETurkey Izimoto Initiative Group kusukela akhawunti Twitter senziwa mayelana entsha yasekhaya imoto ukwabelana. Kwashiwo ekwabelaneni ukuthi imoto inengqalasizinda engavuselelwa nge-inthanethi futhi ithuthukiswe ngokuya nge-'level 3 nangaphezulu' kwezinguquko zokushayela ezizimele.
ETurkey Izimoto Initiative Group (TOGG) ekupheleni 2019 wayebangele injabulo enkulu ekhuthaza automakers yasekhaya.
Izakhamizi zethulwe ngolwazi olusha olumayelana nemoto eyethulwa ngezindlela ezimbili ezahlukene zomzimba: iSUV neSedan.
IZINHLELO ZOKUSEKELA ZOKUSEKELA ZOKUXHASA
TOGG isithombe ukwabelana eyenziwe ikhasi Twitter "kungenziwa ngcono imoto eTurkey phezu Internet 'level 3 nangale' ezizimele ukushayela ukuguqulwa, kuhambisana ingqalasizinda athuthukile kanye drive eziphambili sezimoto nokusekela izinhlelo futhi ngeke ekudambiseni ukukhathala uhambo olude" isitatimende wathi.
IZIMALI ZESIFIZO ZIZOBUYA E-5 STARS
Izikhwepha High umthelela, oluphelele izakhi zokuphepha yekwentiwa sezihambile umshayeli nosizo izinhlelo oluyokwenza Euro NCAP 2022 inkanyezi ukuphepha nemithetho 5 kuzothatha ngokuphepha ujabulele uhambo ne İNTURKEY yomdabu imoto.
Ithuluzi lalenziwa yi-Italian design bureau Pininfarina. Kwenziwa izimoto zakwa-Prototype e-Italy.
Bangaphezu kuka-100 onjiniyela ababambe iqhaza ekwakhiweni kwale moto. Ibhethri lemoto lihlanganiswe endaweni yesikhulumi. Yakhelwe ukwamukela izinkanyezi ezi-5 ezivivinyweni zokuphahlazeka kwe-Euro NCAP. Imoto izoba nama-airbags angama-7 ajwayelekile kanye nama-2. Imodeli yokuqala ezokhiqizwa ihlelelwe ukuba yi-C class SUV, futhi ngonyaka ka-2030, amamodeli ehlukene ayi-5 azofakwa ekukhiqizeni. Kukhona ama-tulip motifs ku-grille engaphambili yemoto.
Iphaneli yezinsimbi yemoto iqukethe ngokuphelele izikrini ze-elekthronikhi. Iphaneli inezikrini ezintathu zokubonisa kanye ne-multimedia eyi-intshi (10 cm) nesikrini sokuhambisa. Imoto ayinaso isibuko esiseceleni, kunalokho, kunamakhamera.
IMIDLALO YOKUXHUMANA KWEMALI EZIYIMALI
Imoto inikwa amandla amabhethri e-lithiamu-ion. Kuzohlinzekwa amaphakethe amabili kagesi anebanga elingu-300 km no-500 km ngecala elilodwa, kuya ngomthamo webhethri. Amabhethri ezimoto ahlelelwe ukuthi akhokhiswe ama-30% esikhathini esingaphansi kwemizuzu engama-80. Ngohlelo lokuphinda luvuseleleke kabusha ukuze lifakwe emotweni, kuhlelwa ukuthi izinjini zizosebenza njenge-dynamo ekuwehliseni kwezezinga futhi zikhulise uhla lufike ku-20% ngokuvuselela ibhethri.
Imoto ihlelwe ukuthi ikhiqizwe ngamandla enjini amabili ahlukene, okungama-200 HP ane-back-wheel drive ne-400 HP enama-wheel drive amane. Ijubane lemoto, Ijubane layo lokugcina lizoba ngu-180 km / h, ukushesha ngo-400-0 km / h ngohlobo lwe-100 HP kanye nemizuzwana engu-4.8 ku-200 HP version.
Kuhlelwa ukuthi imoto izitholele ngokuzenzakalela izibuyekezo ezivela efektri nge-inthanethi ye-4G / 5G, nokuthi imoto ingaphazanyiswa ukude uma kwenzeka ingasebenzi. Kuchazwa ukuthi imoto izoba nezimpawu zokushayela ezilinganayo 3.
ZIYOGCULWA KANJANI IZIMALI ZEMALI?
Izimoto eTurkey sizonikeza kobuholi tOGGer ukusabalala kuze 2022 izofika sibonga eya ukushaja ingqalasizinda yayo eminingi, emahhovisi kanye lingashajwa eziteshini endleleni. Ngamathuba obuchwepheshe wokuba imoto exhunyiwe neqondayo, abasebenzisi bangakwazi ukuhlela nokuphatha imali yemoto yabo kalula.
LAPHO KUZOGCWALISELWA UMGOMO
Le moto izokwakhiwa efektri ehlelwe ukuthi iqale ukwakhiwa ngo-2020 emhlabeni ongowamaButho Wezempi waseTurkey eGemlik, Bursa futhi uqedwe ngo-2021. Imoto yokuqala ihlelelwe ukukhishwa kusuka ethepheni ngo-2022 bese iqala ukuthengisa. Ukusukela ngo-Okthoba 30, 2019, kumenyezelwe ukuthi imali engamabhiliyoni ama-13 TL yokutshala imali ezongenziwa eminyakeni engu-22 izokwenziwa. Kuhlelwa ukuqasha abantu abangama-4.323 abakhiqiziweni nokukhiqiza izimoto eziyizinkulungwane eziyi-5 ngemodeli ezinhlanu ngonyaka. Kunokwehliswa okuhlukahlukene kwentela efana nokuxolelwa kwentela yangokwezifiso, ukuxolelwa i-VAT, ukuncishiswa kwentela, ukusekelwa kwemali yomshuwalense ngokutshalwa kwezimali nesiqinisekiso sesifundazwe sokuthengwa kwezimoto eziyizinkulungwane ezingama-175. Kuhloswe ukuthi kukhiqizwe imoto isuka ku-30% yezindawo ezifuywayo kwimodeli yokuqala futhi ikhuphule inani lezindawo ezifuywayo iye kuma-51% kumodeli wesibili nowesithathu.
Umhubhe weSalarha ukufaka isandla ekuguqulweni komgwaqo weRi`s
Ukuhlolwa Kwemoto Yasekhaya Ye-Autonomous Starts e-Istanbul
Turkey Avli Ithuthukisa Autonomous Vehicle
Umgwaqo oKhethekile Wezimoto Ezizimele
I-France inikeza usuku lwezitimela ezizimele
Isitimela Sokuqala Sokuzivocavoca Sokuqala Sokuvivinya Isizwe esilingwa eChina
I-Countdown iqala ngo-MARC, Ukuncintisana Kwezemoto Okukhulu Kakhulu KweYurophu
Izimoto Zomuzi Zokwenza Umzila We-500 Mileage Uyokwenza Umgwaqo
Lizoba yini inani lezimoto ezifuywayo?
I-Michelin ikukhuthaza ukukhethwa kwezinkathi zokushayela okuphephile
Ukuqeqeshwa kwamasu okushayela okuphephile kwaqala ukuhlinzekwa kubashayeli bezokuthutha zomphakathi e-Antalya
I-Gebze-Köseköy High Speed ​​Line 27 ngo-Septhemba
I-20 million 1 Ukulondolozwa kwe-Euro ngonyaka kwi-500 khilomitha engaphansi komgwaqo ngokushayela okwezomnotho
Ukuphepha komgwaqo kanye nomshayeli wePlayer Training Training Training
Ukuhlolwa Kwasekhaya Kwezimoto Ze-Euro NCAP
Ifektri Yezimoto Ezasekhaya
Ukushintshwa Kwezimoto Eziyindlwana Okuzenzakalelayo Ukushayela
Idizayini yemoto yasekhaya
Ukucaciswa Kwezimoto Zasekhaya